April 2020 – Shwe Sar
” အိမျတောငျ လူမိုကျ ဘူးမစိုကျ နဲ့ ” ဆိုတဲ့ စကား ပုံ၏ အဓိပ်ပါယျ
Shwe Thit | April 30, 2020
” အိမ်တောင် လူမိုက် ဘူးမစိုက် နဲ့ ” ဆိုတဲ့ စကား ပုံ၏ အဓိပ္ပါယ် သည်စကားပုံလေး ငယ်စဉ် ကပင် ကြားဖူးခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ဆိုလို ရင်းကို ဝေဝါးစွာပင် အိမ်ထောင် ကျပြီး ဘူးစိုက်ရင် လူမိုက်လား? လူလိမ္မာ မှ စိုက်ရမည်လား ? စသဖြင့် အမှတ်မထင်
ကွှလေောကျစရာ အပွုံးလေးနဲ့ အထာကကြလြေး လနျးနခေဲ့တဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှရှေခြေ့ ပွလာခဲ့တဲ့ “နနျးမှစေံ”
Shwe Thit | April 28, 2020
ကြွေလောက်စရာ အပြုံးလေးနဲ့ အထာကျကျလေး လန်းနေခဲ့တဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရှေ့ချ ပြလာခဲ့တဲ့ “နန်းမွေစံ” မော်ဒယ်နန်းမွေစံ ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင် လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ် တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဝေဖန်မှုေ တွရှိနေပမယ့်လည်း အပြုံးမပျက်ဘဲ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်
ခဈြခွငျးမတ်ေတာ အပွညျ့ နဲ့ ခဈြခွငျး ခံနရေတဲ့အကွောငျး ပွော လာတဲ့ ခမျြးခမျြး
Shwe Thit | April 26, 2020
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အပြည့် နဲ့ ချစ်ခြင်း ခံနေရတဲ့အကြောင်း ပြော လာတဲ့ ချမ်းချမ်း နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ သံစဉ်များနဲ့ ကမ္ဘာ သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲကနေ အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာသူ ဖြစ်ပြီး တေးစီရီးအယ်လ်ဘမ် များစွာထွက်ရှိကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုအခို ငအမာရရှိထား သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ မော်ဒယ် ဒါရိုက်တာ ဘုဏ်းသိုက် နဲ့
Shwe Thit | April 22, 2020
ကားနံပါတ်ချိန်း ထားလျှက် ကားပဲတွေ့ပြီး လူထူး ဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံး နေတဲ့ လူပျောက်မှု ပျောက်ဆုံးသူ နာမည်က – ကိုကျော်ကျော် အသက် – (၄၂) နှစ် အဘအမည် – ဦးသာအောင် အလုပ်အကိုင် – သုထက်ကျော် အထည် ဆိုင် မုဒုံမြို့။ ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (15.6.2020)ရက်နေ့
Shwe Thit | April 16, 2020
ကီလိုအမှိုက်ကောက်သူ ကို အိပ်မက် ထဲမှာ ဂဏန်း (၆) လုံး ဒဲ့လာပေး၍ ထီ နှစ်စောင်ထိုးရာ ထိုင်းဘတ် (၁၂) သန်း ထီပေါက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဖိစနုလို့မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် (၅၅) နှစ် အရွယ် Prayak Romsantiea သည် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၁၆:၃၀
Shwe Thit | April 12, 2020
စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်း မှာ သူတို့လေး တွေကြောင့် အရင်လိုပြိုလဲလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ မင်းသမီးချောခိုင်နှင်းဝေ ကတော့ အနုပညာလောကနဲ့နှစ်အနည်းငယ် ကွာဝေး ခဲ့ပြီးနောက် ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ တစ်ယောက်ပါ။ လိုအပ်နေတဲ့နေရာကို လက်မနှေးကူညီနေတဲ့အပြင် ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးေ လးများဂေဟာ တည်ထောင်ပြီး မိဘမဲ့ကလေးအယောက် သုံးဆယ်ကျော်ကို ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်နေပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီကလေးတွေ ကြောင့်ပဲ သူစိတ်ဓာတ်
ဒီလိုလုပျစားနတေဲ့ ရှဆေိုငျတှရှေိနသေ၍ ကတော့ ပညာမတတျတဲ့ အခွခေံလူတနျးစားတှေ ခံနရေအုံးမှာပါပဲ…
Shwe Thit | April 9, 2020
ဒီလိုလုပ်စားနေတဲ့ ရွှေဆိုင်တွေရှိနေသ၍ ကတော့ ပညာမတတ်တဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေ ခံနေရအုံးမှာပါပဲ… ရွှေဝယ်ရာမှာ သတိ ထားပါ.. ဒီနေ့ဆိုင်ကို အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ေ ရွှလာပေါင် တယ်။ ပစ္စည်းကြည့်လိုက်တော့ သိပ်မသင်္ကာဘူး။ အစစ်နဲ့တော့ အတော်တူတယ်။ ဒါနဲ့ ပန်းတိမ် ဆရာကို ချိတ်လေးနားကို အဆိပ်ချခိုင်းလိုက်တာ့ အတုဖြ စ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အဲ့မျိုးသမီးကို ခင်ဗျားကြိုး
ကမ်ဘာ သကျတမျး အရှညျဆုံး အာဏာရှငျ အဖွဈ (၂၀၃၆) ထိ အာဏာ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ ရှိသှားပွီဖွဈ တဲ့ ရှရှားသမ်မတ ပူတငျ
Shwe Thit | April 8, 2020
ကမ္ဘာ သက်တမ်း အရှည်ဆုံး အာဏာရှင် အဖြစ် (၂၀၃၆) ထိ အာဏာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသွားပြီဖြစ် တဲ့ ရှရှားသမ္မတ ပူတင် အသက် ၈၃ နှစ် ထိ သမ္မတ အဖြစ် ဆက်လက် တာဝန် ထမ်းဆောင် တော့မယ့် သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် ရှရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာ
Shwe Thit | April 5, 2020
ဇူလိုင်လ (၂)ရက် နေ့ အတွက် မိုးလေဝသသတင်း ( နံနက်(၇:၀၀)နာရီ အချိန် မိုးဇလ ထုတ်ပြန်ချက်) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြ င်နှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေ
နောကျကြောတကျ ဇကျကွော တကျ လကျပွငျငုတျ အုံးလှဲနသေူမြား အတှကျ နာရီပိုငျး အတှငျး ပြောကျတဲ့ နညျးလေးပါ
Shwe Thit | April 1, 2020
နောက်ကျောတက် ဇက်ကြော တက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများ အတွက် နာရီပိုင်း အတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးပါ အဆင့် (၁) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက် ကို နဖူးပေါ်တင် ခေါင်းကို နောက်လှန်နိုင် သလောက် လှန်ဖိထားပါ။ ခါးမပါသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။